Tsy mandefa bitsika intsony i Donald Trump | Apg29
Naato tamin'ny Twitter ny filoham-pirenena amerikana
Io no toa kaonty Twitter naato an'i Donald Trump ankehitriny.
Ny zanakalahin'i Donald Trump, Donald Trump Jr., dia niditra tao amin'ny Twitter hitsikera ny fanapahan-kevitra hanidy ny rainy.
Heveriko fa ratsy ny zava-nitranga rehefa nanafika ny Capitol tany Washington, Etazonia ireo mpanohana an'i Trump , ary tena voakasik'izany aho.
Ankehitriny ny Twitter dia nanidy an'i Donald Trump tamim-pahamendrehana teo amin'ny sehatra misy azy ireo.
Facebook, Instagram ary Snapchat koa dia nanidy ny kaontin'ny filoha nandritra ny fotoana tsy voafetra.
Ho fanampin'izay, Donald Trump dia nanana kaonty ary nijanona tamin'ny fampielezam-peo Twitch sy Tiktok ny fandaharana.
Ny anton'ny fanidiana
Nanazava tamin'ny lahatsoratra iray tao amin'ny bilaoginy ny Twitter ny antony nanakatonan'izy ireo ny filoha:
Toy izao ny filazany amin'ny teny soedoà araka ny fandikan'i Google:
Taorian'ny fandinihana tamim-pitandremana ireo bitsika farany avy amin'ny kaonty @realDonaldTrump sy ny zava-misy manodidina azy - indrindra ny fomba fandraisana sy fandikana azy ireo sy amin'ny Twitter - nohidianay tanteraka ny kaonty noho ny mety hampihantona herisetra bebe kokoa.
Milaza izany fa mahatsiravina ny zava-nitranga rehefa notafihana ny kapiteny Kapiteny, saingy ny Filoham-pirenena tokoa ve no niantso herisetra?
Ny zanakalahin'i Donald Trump, Donald Trump Jr., dia niditra tao amin'ny Twitter hitsikera ny fanapahan-kevitra hanidy ny rainy:
"Miaina ao amin'ny Orwell tamin'ny 1984. Tsy misy any Amerika intsony ny fahalalahana miteny. Maty tamin'ny teknolojia lehibe izy io ary ny sisa tavela dia tsy misy afa-tsy ho an'ny vitsivitsy voafantina."
"Ka ny ayatollahs sy ny fitondrana jadona maro hafa dia mety hanana kaonty Twitter tsy misy hetsika na dia mandrahona firenena iray manontolo aza amin'ny famonoana olona sy famonoana ireo lehilahy miray amin'ny lehilahy sns ... saingy tokony hatsahatra maharitra ny filoham-pirenena amerikana. Hirehareha i Mao."
Mivavaha ho an'ny toe-javatra any Etazonia. Mivavaha mba hitodihan'ny olona amin'i Jesosy ary handray azy. Izy irery ihany no mahavonjy sy manafaka. Voaporofo indray fa misy mpitondra politika sasany tsy afaka mamonjy sy mamonjy olona.
Ilay tokony hatokisanao
Ny sasany nahita an'i Donald Trump ho olon'Andriamanitra naseho tato ho ato. Fa raha matoky olona isika, dia ho diso fanantenana tokoa, araka ny fiheverako fa lasa maro izao.
Ilay lehilahy natolotr'Andriamanitra tato ho ato dia tsy i Donald Trump, fa i Jesosy Kristy Zanany lahitokana. Izy dia olon'Andriamanitra ary izy no Mpamonjy. Jesosy no tokony hatokisanao, ary avy eo tsy ho diso fanantenana mihitsy ianao.